आज मिति २०७६ साल भदौ २६ गते बिहीबार । इ.स. २०१९ सेप्टेम्बर १२ तारिख । ने.सं. ११३९ ञलाथ्व । भाद्र शुक्लपक्षको चतुर्दशी तिथी
मेष राशी हुनेहरुको लागि आजको दिन श्रमको मूल्यांकन भए पनि प्रतिफल पाउन गाह्रो पर्ला । अरुको कमै विश्वास गर्नु होला । नयाँ कामको थालनि हुने योग रहेको छ ।
बृष राशी हुनेहरुको लागि आजको दिन काममा अलिक बढी श्रम र मेहन गर्नु पर्ने बेला आएको छ । बोलेका काम गर्न नसक्दा विभिन्न टिकाटिपनी सहनु पर्ला । ढिला काम बन्ला । आफन्तको मनोभाव बुझेर काम गर्नु होला । सेवामुलक कामले आशा जगाएपनि साईनो गाँस्ने देखि टाढै रहेको राम्रो ।
मिथुन राशी हुनेहरुको लागि आजको दिन गुमाएका वस्तु पाउन सक्नु हुने छ । व्यापार व्यावसायबाट राम्रो आम्दानी हुने योग रहेको छ । अल्झिएका काम बन्ला । मेहनत र परिश्रमले जिवन शैलिमा परिवर्तन आउनेछ । भविष्यको लागि राम्रो कामको थालनि हुने छ ।
कर्कट राशी हुनेहरुको लािग आजको दिन सानातिना काममा ध्यान नदिदा दुख भोग्नु पर्ला । कामको चाप बढेसँगै धन खर्च हुने छ । व्यापार व्यावसायमा ध्यान दिनु होला । गोपनियता खुल्नाले समस्या पर्न सक्छ । काम
सिंह राशी हुनेहरुको लागि आजको दिन र्साइनो सम्बन्ध चुटिएपनि प्रेम बन्धन गाढा बन्ने छ । स्वास्थ्यमा समस्या आउला । मिहेनत र बुद्धिले केहि काम होला । अतिथिको सम्मान पाईएला । रार्माइलो यात्राको होला ।
कन्या राशी हुनेहरुको लागि आजको दिन बुद्धि र विवेकले प्रतिष्ठा जोगाउन सकिने छ । खानेकुरामा ध्यान दिनु होला । आँटेका काम नबन्ला । शत्रुबाट जोगिनु होला । गोपनियतामा ध्यान दिनु होला ।
ताुला राशी हुनेहरुको लागि आजको दिन शिक्षामा प्रगती हुने छ । सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ । आफन्तको साथ र सहयोग मिल्ने छ । प्रतिभाको प्रर्दशनसँगै बुद्धिले जित हासिल गर्न सकिने छ । प्रतिक्षको कुरा पुरा होला । श्रोतको मुहान पत्ता लाग्ने छ ।
बृश्चिक राशी हुनेहरुको लागि आजको दिन आफुले सोचे जस्तो अवस्था नआउन सक्छ । नसोचि नबोलेकै राम्रो । साथी भाई टाढिन सक्छ भने अरुले प्रयोग गर्न सक्छ । फाईदा उठाउन नसकिएपनि सहयोगीको साथ भने पाईने छ ।
धनु राशी हुनेहरुको लागि आजको दिन आफु सजग नबन्दा आफन्त टाढिन सक्छ । अवस्था अनुसार बुद्धि लगाउनु होला । व्यापार व्यावसायमा केहि समस्या आउला । मिहेनेतको फल भने प्राप्त हुने छ ।
मकर राशी हुनेका लागि आजको दिन अतालिदा काम अड्किन सक्छ । बोल्दा होस् गर्नु होला । समस्यामा बुद्धिको प्रयोग गर्दा लक्ष्य भेट्न सकिएला । अरुको आशले पछि परिने छ ।
कुम्भ राशी हुनेहरुको लागि आजको दिन बोलचालमा ख्याल गर्नु पर्नेछ । आफन्तको सहयोगले काम पुरा हुने छ । व्यापार व्यावसायमा लाभ मिल्ने छ । छुटेका आफन्तसँग भेटघाट होला ।
मिन राशी हुनेहरुको लागि आजको दिन नजिकका साथीभाई टाढिएपनि टाढाकोसँग आत्मियता बढ्नेछ । केहि खर्च होला तरपनि दिगो फाईदा दिने कामको सुरुवात हुने छ । पुराना काम बन्नेछ । शत्रुमाथी जित हुनेछ । बैदेशीक क्षेत्रबाट लाभ मिल्ने छ ।